बस्ती निर्माणका लागि जिग्री पाँडेलाई आर्थिक अभाव, तोकेको समयमा भएन सिनेमा घोषणा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
५ बैशाख,२०७४ | Forseenetwork
कुमार कट्टेल उर्फ जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेले सप्तरीका दृिष्टविहिन परिवारका लागि बस्ती निर्माणको काम थालनी गरेका छन् । उनीहरुले तीन दृष्टिविहिन परिवारका लागि तीनवटा अपांग मैत्री, बाल मैत्री र वातावरण मैत्री घर बनाउनको लागि आर्थिक अभाव भएको जानकारी गराएका छन् । नयाँ वर्षको अवसर पारेर बैशाख २ मा उक्त बस्तीको शिलान्यास दाजु सीताराम कट्टेल धुर्मस र भाउजु कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको हातबाट गरिसकिएको छ । तीनवटा घर निर्माणको लागि तीस लाख चाहिने र हालसम्म जम्मा १५ लाख मात्र जम्मा भएकाले उनीहरुलाई अझै १५ लाख रुपैयाँको आवश्यकता छ । हामीसँग कुराकानी गर्दै कुमारले आफूले यो बाँकी रकम पनि देश विदेशमा रहने नेपालीहरुले सहयोग गर्ने आशा राखेको बताए । तर यदि भएन भने पनि आफूहरुले सहयोगी संघसस्थाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर वा देश विदेशमा कमेडि कार्यक्रमहरु गरेर रकम संकलन गर्ने बताएका छन् ।
जिग्री—पाँडे प्रतिष्ठान मार्फत रकम संकलन भईरहेको छ । त्यस्तै यो बस्ती निर्माणमा जिग्रीका दाई र भाउजु धुर्मुस—सुन्तलीको पनि सहयोग रहनेछ । । जिग्रीले पनि धुर्मुस—सुन्तलीका सबै प्रोजेक्ट काभ्रेको पहरी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर, मुसहरबस्ती निर्माणमा आर्थिक र श्रमदान संकलनमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर गरिएको मुसहर बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुगेका कुमारसँगको कुराकानीका क्रममा हामीले उनीहरुले सिनेमा बनाउने कुरालाई पनि कोट्यायौँ । कुमार कट्टेल उर्फ जिग्री र अर्जुन घिमिरे उर्फ पाँडे मिलेर सिनेमा बनाउने कुरा केही समय अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । कुमारले नै हामीसँग कुराकानी गर्दै आफूहरुले सिनेमाको काम थालनी गरेको बताएका थिए । त्यसबखत उनले धुर्मुस सुन्तलीको मुसहर बस्ती हस्तान्तरणको दिनमा नै सिनेमाको आधिकारिक घोषणा गर्ने योजना बनाएको खुलाएका थिए । जिग्रीले आफ्नै दाजु भाउजुलाई सिनेमाका मुख्य कलाकार बनाएर सिनेमा बनाउने योजना बनाएका छन् । तर नयाँ वर्षमा धुर्मुस सुन्तलीको सुन्दर मुहसहर बस्ती हस्तान्तरण भयो उनीहरुले सिनेमाको बारेमा भने कुरै उठाएनन् ।
हामीले ज्रिगीलाई सोधिहाल्यौँ, खै ! तपाईँहरुको सिनेमाको बारेमा आधिकारिक जानकारी आएन नि ? जवाफमा जिग्रिले भने, ‘सिनेमाको काम अगाडि बढिरहेको छ घोषणा मात्रै नभएको हो । हामीसँग एकदमै समयको अभाव भयो । यता बस्ती निर्माणको काम सकाउनु पर्ने चाप रह्यो जसले गर्दा दाई भाउजुको पनि समय भएन । अर्कातिर हाम्रो भद्रगोल पनि सुरु भयो । अन्य स्टेज कार्यक्रमहरुमा पनि गईरहनु पर्ने अनि सामाजिक काममा पनि ध्यान दिनु पर्ने भएकाले हामीले समयमा काम सकाउन सकेनौँ र घोषणा पनि गर्न सकेनौँ । तर यहि बैशाख भित्र नै यसको आधिकारिक घोषणा गर्छौँ । कलाकार निर्देशक लगभग सबै फाईनल भईसक्नु भएको छ ।’